Drywall partition hurongwa
Metal mhete uye njanji
Unique simbi mugero
Aluminum rusvingo & siringi hurongwa
Wechitema simende bhodhi
Normal simende bhodhi
Wood tsanga simende bhodhi
EPS simende bhodhi
Paper kunotsigirwa gypsum bhodhi
Fireproof gypsum bhodhi
Normal gypsum bhodhi
Waterproof gypsum bhodhi
PVC gypsum bhodhi
Washington City Offices kuputira
Phenolic furo bhodhi
Rock shinda kuputira
Steel mhete rusvingo kugadzira mapango okuvaka ndiye muupenyu hwedu
Nokuda kwayo akanaka features, simbi mhete kugadzira mapango okuvaka rinoshandiswa chaizvo yedu rokuvaka.
A kwekanguva kuti Greek womusango vakatambudzwa
by pamusoro 18-07-28
The moto vakaipisisa Greece akamborara muna pamusoro gumi rakatanga musi Monday, charring dzimba uye motokari sezvakanga akapisa kuburikidza mumhenderekedzo yegungwa Attica yakapoteredza Athens. Kanenge 74 vanhu vari yasimbiswa vakafa kubva moto womusango uye zvakawanda kuramba zvisipo. Nyatsoteerera kudzivisa moto, kuchengeteka nemisipiresi ...
Recently Gengi hakusi kugadzikana, uye pasi rose zuva. Vose, zvinenge zviri kumuka kubva ikozvino.
A hwindo itsva kwatiri kuwana
Saka dada kuti vakatanga Website redu idzva. Inoratidza zvimwe zvigadzirwa kuti Changye unobereka uye zvirongwa dzakavakwa. Kana usina kumbobvira vanzwa Changye kare, kutanga pano iwe uchaziva kuti zvakanaka. Sezvo bhizimisi inokura huru, takavaka nzvimbo itsva iyi akumbirwa mutengi yedu ...
R1005, Tsika Building, Xin'an 3rd Road, Bao'an District
For kubvunza pamusoro zvinhu zvedu kana price list, ndapota siya email nesu uye isu tichava nekuonana mumaawa 24.